Pegatron oo dhibaato kula jira Apple ka faa'iideysiga shaqaalaha suurtagalka ah | Waxaan ka socdaa mac
Toddobaadkan sida ay sheegtay warbaahinta caanka ah Bloomberg Apple waxay si kumeelgaar ah u joojisay amarradii ka soo baxay Pegatron oo lagu eedeeyay inay ka faa'iideysatay shaqaalaha. Kiiskan soo-saaraha ayaa u adeegsan lahaa ardayda isbeddello dheeri ah iyo habeenno, markii runtii aysan qaban karin noocan kala guurka ah.
Apple ayaa baareysa xaalada iminkana waxay curyaamisay amarro shirkada soo saartay ilaa xaalada laga cadeeyo. Ardaydani waxay ku lug leeyihiin wax soo saarka qaybaha laakiin waxay leeyihiin door ka duwan kan shaqaalaha halyeeyga ahXaaladdan oo kale, waxay u muuqataa in shirkaddu ay ku dhaafi lahayd tan iyada oo la siinayo isbeddellada habeenkii oo lagu daro waqti dheeri ah.
Shiinaha, sharciyadu aad ayey uga duwan yihiin wadamada kale xagga shaqada, dhaqanka shaqaduna waa ka fog yahay waxa aan ku qabno qeybaha kale ee meeraha, sidaa darteed iyada oo aan run ahaantii la ogeyn kiiska, cidna si rasmi ah looma eedeyn karo sidoo kale, sidaas darteed waa waxaa ugu wanaagsan in la furo feyl oo aad si qoto dheer loo darso. Xaaladdan oo kale, shirkadda Cupertino ayaa aasaastay buug ka mid ah Mas'uuliyadda Alaab-qeybiyeyaasha in sida muuqata Pegatron waa laga boodi lahaa, markaa waa la baarayaa.
Shaqada khasabka ah ee ay ku kacaan caruurtan yar dhab ahaan Apple ma aysan cadeynin xilligan, laakiin waxay ogaadeen dukumiintiyo been abuur ah oo fure u noqon kara in la ogaado haddii dhiig-miirashada foosha ay runti jirto. Waxaas oo dhan waxaa xaqiijinaya shirkadda Waqooyiga Ameerika ee u heellan sharci cad oo arrintan la xiriira oo aan lahayn nooc ganacsi oo looga faa'iideysto, haddii la xaqiijiyo waxaan arki doonaa sida ay Apple ula macaamileyso soo saarahaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Pegatron oo dhibaato kula jira Apple ka faa'iideysiga shaqaalaha ee suurtogalka ah
Tani waa waxa Apple ku soo bandhigi doonto berri munaasabadda sida ay sheegayaan xanta.
Miyaad rakibi doontaa macOS Big Sur isla markiiba mise waad sugi doontaa?